ORAAH MACAAN: Hadalka wanaagsan waa Sadaqo. - iftineducation.com
iftineducation.com – ORAAH MACAAN: Hadalka wanaagsan waa Sadaqo.
Nin Shaqaalle ka ah mid ka mid ah Warshadaha keydiya kalluunka ee ku yaalla dal ka mid ah Qaaradda Yurub , ayaa waxa uu xilli shaqada laga caraabayay gudaha u galay qeybta qaboojisa kalluunka ee loo yaqaan firintijeerka si uu u hubiyo howsha kahor inta aanu shaqada ka bixin waqtigeeda.
Xilli uu howshiisa fulinayo, ayaa waxaa si kedis ah u xirmay qeybta firintijeerka , waxa uu isku dayay inuu furo albaabka , waa uu kari waayay, waxa uu bilaabay inuu qeylo dhaamiyo si ay gurmad ugu yimaadaan shaqaallaha kale , hayeeshee shaqaalluhu waqtiga shaqadoodu wuu idlaaday, weyna guryo noqdeen.
Waqti kooban kadib, ninku wuu ka quustay furidda albaabka, xaalkiisuna waxa uu ku dhowaaday geeri qabowga daran ee haleelay awgiis.
Marqura ayuu ka war helay albaabka firintijeerka oo laga soo furay qeybta bannaanka xigta, waxa ay u aheyd farxad , waxaa soo furay mid ka mid ah ilaalada warshada, sidaas ayuu ku badbaaday howlwadeenkii dhibanaa.
Maareeyihii Warshadda ayaa waqti dambe yimid goobta, waxaanu weydiiyay ilaaliyaha sida uu ku gartay in qof ka mid ah shaqaallaha uu weli ku harsan yahay gudaha warshadda .
Ilaaliyihii ayaa ku jawaabay “Anigu waxa aan ka shaqeynayay warshaddan muddo dhan sodon (30) sano, waxaa soo gala, kana baxa boqolaal shaqaale si joogta ah maalin kasta , midkoodna ima salaami jirin marka laga reebo howlwadeeenkaasi oo i weydiin jiray xaaladeyda”.
Ilaaliyuhu waxa kale oo yiri “ Shaqaaluhu markii ay shaqada ka baxeen, ma aanu arag , waan u xiisay, waan tabay, waxaan dareemay inuu ku jiro gudaha Warshadda, waan baadi doonay, waxaase aan helay isaga oo dhibtoon oo badbaado u baahan”.
Sheekadan waxaa laga garan karaa:
– Waxyar oo wanaag ah oo aad sameysid qiimaha ay yeelan karto .
– Hadalka wanaagsan waa furaha qalbiga .
– Hadalka wanaagsan waa Sadaqo .